Abavelisi bemishini yePleyiti ye-Plate-I-China Iipleyiti zeMveliso yeeNdawo abaXhasi kunye neFektri
Iplate Ice Evaporator
Plate ice evaporator ikakhulu iwele kwiintlobo ezimbini, ezizezi, ingxubevange yealuminium kunye nentsimbi evaporator. Plate ice evaporator isebenzisa iinkqubo zokwandisa ngqo kunye ne-R22, R507A, R404A okanye i-ammonia (R717) njengesixhobo sokupholisa.
I-Snowman ngumvelisi womatshini weplate yomvelisi kunye nomthengisi. Ngokuhambelana nemigangatho yeHaccp kunye ne-FDA, umatshini wethu womkhenkce weplate ulungele ngokukodwa ukugcinwa kokutya kunye nokugcinwa. Ngumatshini omncinci kodwa osebenza kakuhle kwiimfuno zakho zokupholisa umkhenkce.
Umenzi wethu weqhwa ulungiselelwe nge-alloy kunye ne-teknoloji yokulungisa patent. Kukhuthaza kakhulu ukuqhuba ubushushu. Akufuneki ukufudumeza okungaphezulu, lo matshini wokwenza umkhenkce usebenzisa igesi eshushu eyenziweyo ukuze isuse umkhenkce, osebenza kakuhle kunye nokonga umbane.